भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला ! – चितवन मिडिया
भारतको सिमा रक्षा गर्दा गर्दै जम्मु-कास्मिरमा अ’स्ता’ए सम्बुर गुरूङ, मनमा अलिकति दया माया छ भने #RIP लेख्नुहोला !
गोर्खा सैनिकमा भर्ती भएका नेपालीहरुले भारतको सिमा रक्षा गर्दा अहिले सम्म थुप्रैको ज्या’न गएको छ भारतले सिमा वि,वा,द भएका स्थानमा गोर्खा सैनिकलाई पठाउने गरेको छ ।
सिमानामा भारतको भूमी रक्षा गर्दा ज्या’न गु’मा’एका नेपालीहरुमा सम्बुर गुरूङको पनि नाम थपिएको छ।उनी गुल्मीका हुन्। पा’किस्तानको सीमा क्षेत्र जम्मु कस्मिरमा ३/८ जिआरमा कार्यरत सम्बुरको सिमानामै ज्या,न ग,एको छ ।
भारतले पाकिस्तानले गरेको गो’लाबारीमा उनको ज्या’न गएको दावी गरेको छ । उनको नि’धनको खबरले गुल्मीमा शोक छाएको छ।भा’रतीय सेनामा कार्यरत हवल्दार सम्बुर गुरूङले दिन’हुँ घरमा फोन गर्थे । उनको श्रीमती बालमाया गुरूङ भने काठ’माडौं बस्दै आएकी छन् दिनहुँ जसो श्रीमानसंग उनको कु’रा हुनथ्यो।
विहिवार पनि उनको श्रीमानसंग कुरा भयो । तर त्यती’बेला श्रीमानले आफु ल’डाइमा जान लागेको कुरा सुनाएका थिएनन्। यु’द्ध विराम भएका कारण उनले पनि ल’डाइको आँकलन गरेका थिएनन् ।
तर शुक्रबार बिहानै अचा`नक भएको गो’लाबा’रीमा उनको ज्या’न गयो। सम्बुरको छोरी इलाले बुवा’संग बुधवार बिहान कुरा गरेका बताएकी छन् । शुक्रबार बिहान इला सु’तिरहेकै बेला’मा फो’न आयो । आमा एक्कासी रु’न थालेपछि इलाले थाहा पाइन् बुवा यो संसारमा हुनुहुन्न । उनलाई फोनमा कसैले भन्यो तिम्रो बुबा सहिद हुनुभयो।’ भारतीय से’नामा सम्बुर भर्ती भएको १८ वर्ष पुगेको उनको आफन्तले जनाएका छन्। बुधवार फोनमा कुरा हुँदा अब म द’र्शैमा आउछु भनेर भनेका थिए। स्रोत शान्ति बोट
ॐ निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेवको दर्शन र महिमा पढि सक्दो शेयर गर्नुहोस्